IiJongo zikaYouTube zamahala | Ukuthandwa kwamahala kuYouTube | Izimvo zikaYouTube zasimahla
IiJongo zikaYouTube zamahala | Ukuthandwa kwamahala kuYouTube
Ababhalisile bakaYouTube basimahla | Izimvo zikaYouTube zasimahla
#1 Iqonga lokuzibandakanya likaYouTube lokufumana iimbono zasimahla zikaYouTube, izinto abazithandayo, izimvo kunye nababhalisile kubantu bokwenyani!
Ingaba isebenza kanjani? Fumana iingqekembe ngokunxulumana namanye amajelo amalungu. Ke, ngenisa iividiyo zakho kwiGoViral, khetha iinkonzo ofuna ukuzifumana kwaye kwimizuzu nje, uyakuqala ukufumana iimbono, ukuthanda izimvo kunye nababhalisile kubantu bokwenyani, simahla!
Fumana uHlumo lukaYouTube lwasimahla ngoku! or Thenga abathengi be-YouTube
Izibonelelo zokusebenzisa i-GoViral yemihla ngemihla
Inene simahla ukuSebenzisa!
Amava enkonzo esemgangathweni yeprimiyamu simahla kunye neenketho zokuphucula umrhumo.
Inika ukuBonwa simahla, ukuthandwa, ababhalisile kunye nezimvo
Inethiwekhi yethu ikuvumela ukuba ukhawuleze kwaye ngokulula ufumane ababhalisi basimahla, ukujonga, ukuthanda kunye nezimvo. Yonke into oyifunayo!
Ukukhula okuzenzekelayo kweYouTube
Ngenisa iividiyo zakho kwinethiwekhi yethu kwaye ufake ubungakanani benkonzo nganye ofuna ukuyifumana. Emva koko, hamba uyeke inethiwekhi yethu ihambise ngokuzenzekelayo yonke into kuwe.
Iphucula ukukhula koqoqosho
Ukufumana ababhalisile, ukujonga, ukuthanda kunye nezimvo kunceda ekwandiseni uluhlu lwakho lokukhangela, olunceda ukwandisa ukukhula kwakho kwendalo kunye nokuzibandakanya.
Gxila kumxholo wakho kunye nokuthanda kwakho ngelixa inethiwekhi yethu ihambisa ukubandakanyeka kwisitishi sakho kunye neevidiyo.
Ujongano lwethu luyasebenziseka kwaye luyazichaza. Ngena, ngenisa iividiyo zakho, ukhethe inani lababhalisi, ukujonga, ukuthanda kunye nezimvo oza kuzifumana kwaye ugqibile!
Fumana iingqekembe zemali ngokubukela iividiyo kunye nokuzibandakanya nazo.
Sebenzisa imali yakho
Chitha iingqekembe zakho zemali ukufumana iimbono zasimahla, ukuthandwa, ababhalisile kunye nezimvo.
Hlala umva ngelixa ufumana ababhalisile, ukujonga, ukuthanda kunye nezimvo!
Iyandinceda ukuphucula ijelo lam…
Olu yayilukhuthazo esaludinga ukuze iphepha lethu libonakale ngokukhawuleza!
YINTONI le nkonzo!
Enkosi kakhulu kubafana ngenkonzo entle kangaka! I-GoViral yeyona APP EBALASELEYO!
Ubuphi kulo nyaka uphelileyo?
Fumana izimvo zasimahla zeYouTube kwaye ufumane amaXabiso amaShishini aXabisekileyo ngeNtengiso yeYouTube
Ngaba ujonge ukukhulisa ishishini lakho kwaye wandise inzuzo yakho yeshishini? Kuya kufuneka usebenzise intengiso yevidiyo. Akukho sicwangciso-qhinga sentengiso seshishini esigqibeleleyo namhlanje ngaphandle kwesicwangciso sentengiso yevidiyo. Emva kwayo yonke loo nto, xa kufikwa kwintengiso yomxholo, iividiyo zibhalisa ii-ROI eziphezulu. Nokuba zithini na iinjongo zakho ezithile emva kokuzibandakanya nokuthengisa ividiyo, umthambo uqinisekile ukuhambisa.
Ukuthengisa ividiyo kuyaziwa kakuhle kwizangqa zentengiso ngokukwazi kwayo ukuqhuba ukuzibandakanya kwabathengi kunye nokuvelisa isikhokelo kwishishini lakho. Ukuba awukabandakanyi ukuthengisa ividiyo kwisicwangciso sakho sokuthengisa, lixesha lokuba wenze njalo. Ukuthengisa ividiyo kuya kukala kuphela ukuphakama kwixa elizayo kwaye wenze ukuba kufumaneke uluhlu lwezibonelelo zentengiso zeshishini lakho.
Kutheni ukhetha iYouTube yokubamba ishishini lakho kwimixholo yevidiyo
Asinakuthetha ngeevidiyo ezikwi-Intanethi kwaye singakhankanyi iYouTube. Ukubamba ividiyo kunye nokwabelana ngewebhusayithi ziye zafana nomxholo wevidiyo ekwi-intanethi. Ngapha koko, uninzi lwabantu alwazi, kodwa iYouTube iyindawo yesibini yokukhangela eyaziwayo. Ngamanye amagama, unabaphulaphuli abakulungeleyo kwiwebhusayithi, kwaye ukulayisha umxholo wevidiyo kwintengiso kuYouTube kukunceda ukuba ubekwiqondo eliphezulu ngokwe-SEO ngokunjalo. Ukufumana izimvo ze-YouTube kwisitishi sakho seshishini likaYouTube kunokukunceda ubonakale ngakumbi uphawu lwentengiso yakho kwaye uphucule ukufikelela kwayo. Ke, kutheni le nto unokufuna ukukhetha enye iwebhusayithi yokubamba ividiyo ukuze ulayishe umxholo wentengiso yevidiyo kuyo?
Ukulinganiswa kwezibonelelo ezixhaswe zedatha yentengiso ye-YouTube
Kweli candelo, sijonga ngokweenkcukacha zonke izibonelelo ozifumanayo xa ukhetha iYouTube njengeqonga olithandayo lokwabelana ngeevidiyo zokuthengisa ishishini lakho:
Ukubonakaliswa okungakholelekiyo -YouTube ngukumkani wazo zonke iinkonzo zewebhu ezabelana ngevidiyo. Abasebenzisi abaneminyaka eli-15 ukuya kwengama-55 ubudala bayafikelela eqongeni rhoqo. Kukhuselekile ukuba ividiyo inokukunceda ukuba uqaphele. Nangona kunjalo, kukho itoni yomxholo wevidiyo kwiwebhusayithi, kwaye kuya kufuneka ubenakho ukwenza iividiyo ezifanelekileyo ezisemgangathweni ukuze uqiniseke ukuba azilahlekanga elwandle kuzo zonke iividiyo ezininzi ezibanjelwe apho. Ukufumana iimbono zomxholo wevidiyo kungangumsebenzi onzima. Ngesi sizathu, ukuba ungayifumana indlela yokufumana ukujonga kwi-YouTube yejelo lakho leshishini likaYouTube, kufuneka ulithathe ngokulula
Ukugcwala kwabantu abaninzi -I-YouTube ibhalisa ukugcwala okuphezulu kwabasebenzisi imini yonke. Inani labasebenzisi bayo abaliwaka lezigidi lilindile ngaphezulu kweebhiliyoni zeeyure zevidiyo kumdlalo wokubamba wewebhu. Inkonzo yokubamba ividiyo simahla iyakwazi ukufikelela kubabukeli ngokubanzi kunethelevishini yekhebula. Inika amashishini ngesicwangciso-buchule sokuhambisa esinexabiso eliphantsi kwiividiyo zentengiso abazivelisayo. Ukuba isetyenziswe ngokuchanekileyo, nawe unokubeka amawaka eembono kumxholo wevidiyo yakho yentengiso, uqinisekisa umsinga weshishini elingenayo lophawu lwakho.
Ubungakanani bentsholongwane -YouTube ibonelela ngamashishini ngezinto ezininzi ezinokubangela ukuba umxholo wevidiyo uhambe wentsholongwane. Ungawubeka umxholo wevidiyo yakho kunxibelelwano oluninzi lokuthengisa, njengokuyifaka kwiposti yakho okanye wabelane ngesiqhagamshelo sayo kwiforum yengxoxo ye-LinkedIn.
Ukuphuculwa kwe-SEO Ukusukela oko uGoogle wafumana iYouTube, iinjini yokukhangela zibeka iwebhusayithi kunye nomxholo wevidiyo yeYouTube ephezulu kwiinjini zokukhangela. Ngamanye amagama, ayisiyokwakha kuphela isicwangciso sakho somxholo wevidiyo ejikeleze i-YouTube esikunceda ukuba uphumelele izimvo ezenza inzuzo kwintengiso yakho ye-YouTube, kodwa ikwaxhamla kwimizamo yakho yentengiso yedijithali. Xa inqanaba le-SEO kwiwebhusayithi yakho yeshishini liphuculwe, iphepha lakho lewebhu lophawu lubhalisa ngokuzenzekelayo iphepha-lokujonga.
Umdibaniso olula kunye nentengiso yemidiya yoluntu Akukho nto isebenza ngokufanelekileyo kwintengiso yemidiya yoluntu kunokwabelana ngomxholo wevidiyo. Xa usenza ividiyo yentengiso enexabiso eliphezulu kwishishini lakho kwiYouTube, uyakonwabela ukuguquguquka kokwabelana ngayo kumaphepha eendaba ezentlalo. Abantu abaninzi banokujonga iividiyo kumaqonga eendaba ezentlalo avela kwiifidi zabo zeendaba kunokukhangela itshaneli yeshishini lakho. Ukuba bafumana umxholo wevidiyo yakho uthandeka kwimidiya yoluntu, baya kwabelana ngayo ngokulula nabahlobo babo kunye nabantu ababaziyo ngokusebenzisa izixhobo zabo zosasazo. I-YouTube, ke, ikuvumela ukuba udibanise izibonelelo zentengiso yevidiyo kunye nentengiso yemidiya yoluntu kwisicwangciso esinye sentengiso esiqhutywa ziziphumo eziphezulu.
Ukufikelela kwilizwe liphela -I-YouTube iyonwabela ukuthandwa kwihlabathi liphela. Iyasebenza kumazwe angama-88 kwaye inikezelwa ngeelwimi ezahlukeneyo ezingama-76. Ayikho enye inkonzo yokusingathwa kwevidiyo kwiwebhu enokwandisa ukuthengisa iividiyo zeshishini lakho kwihlabathi liphela elinokuthi lifumaneke kwiYouTube. Xa ufumana ukujonga simahla kwi-YouTube kwaye wandise ngempumelelo ukubala ukubala iividiyo zakho zentengiso ku-YouTube, uyinika isohlwayo sentlalo. Abaphulaphuli bayayamkela ividiyo enexabiso lokujonga eliphezulu kunakwividiyo ebonakala ngathi ibukelwe ngabantu abambalwa ngaphambi kwabo.
Uqala njani ngentengiso yeYouTube
Ngoku ukuba ukulungele ukungena kwintengiso ye-YouTube, sicinge ukuba ungasebenzisa isikhokelo sendlela yokuqalisa. Intengiso kuYouTube inokubonakala inzima kubaqalayo abangakhange basebenzise ukusingathwa kwevidiyo kunye nenkonzo yokwabelana njengesixhobo sokuthengisa. Ukuthengisa okusebenzayo ku-YouTube kubandakanya imisebenzi embalwa efuna ukuhoywa nokukhathalelwa. Kuya kufuneka uyazi ukuba uyenza njani ijelo leYouTube yezona ziphumo zibalaseleyo kunye nokwandisa iividiyo ozenzayo kwiYouTube ukuze ubekwe kwindawo ephezulu kwiinjini zokukhangela kwi-intanethi. Kuya kufuneka uqonde ukuba ungalawula njani kwaye usebenze njani kwimikhankaso yentengiso yeYouTube, kunye nokuhlalutya iimethrikhi ezenziwe zafumaneka ngokuhlaziywa kwevidiyo yeYouTube.
Apha ngezantsi, sabelana ngezikhombisi malunga nendlela onokuthi uyiqale ngayo indlela yakho yokuthengisa ividiyo ye-YouTube ngokufanelekileyo ukuze uzuze kwishishini lakho lophawu.
Ukudala nokusebenza kwejelo leshishini kuJouTube
Ukuba unqwenela ukufumana ezona zibonelelo zilungileyo kwintengiso yakho yeYouTube, khetha iAkhawunti yeBrand kuGoogle ukuze ubhalisele iYouTube kunokusebenzisa iakhawunti yakho. Iakhawunti yeBrand iya kwenza ukuba abantu abaninzi bangene kwiakhawunti yakho yeYouTube, kwaye hayi umntu oyenzileyo kuphela. Ukuba usebenzisa iakhawunti yakho yakwaGoogle, igama lomsebenzisi weakhawunti yakho yeYouTube liya kuba lelo sele sele uzichazile kuGoogle. Ukwenza kunye nokulawula amajelo e-YouTube amaninzi ngaxeshanye kuba ngamava angenamthungo ngeAkhawunti yeBhrendi, oya kuthi uxhamle kuyo njengoko ishishini lakho likhula.
Ukudalwa komxholo okusebenzayo akunakufane kwenzeke ngaphandle kophando olwaneleyo. Ukuba ufuna iividiyo zakho zeYouTube zisebenze kakuhle, funda okuncinci malunga nenani labaphulaphuli bakho beYouTube. Zeziphi inkcubeko uninzi lwazo lusuka kuzo, loluphi uluhlu lweminyaka yazo, kwaye bakhetha ukuwusebenzisa njani umxholo wakho? Ukuzazi olu lwazi kuya kukunceda uvelise umxholo ojolise ekuthengiseni ividiyo ekujolise kuyo. Ukuba sele upapashe umxholo wevidiyo kwisitishi se-YT yohlobo lwakho, ungasebenzisa i-tab ye-Analytics yewebhusayithi ukuze ufunde malunga nabaphulaphuli bakho kunye nokuziphatha. Jonga ukugqobhoza kubemi bendawo yabaphulaphuli kunye nabalandeli bakho kwamanye amaphepha eendaba ezentlalo. Kuya kufuneka ikuncede kwindalo yonke yokuthengisa umxholo.
Thelekisa kwaye uvavanye ukusebenza kwegama lakho ku-YouTube kunye nabo ukhuphisana nabo. Jonga iimbono kwiividiyo zabo kunye nenani lababhalisi kumajelo abo. Ungaseta imilinganiselo yokusebenza kwevidiyo zakho zentengiso ye-YouTube ngokufanelekileyo. Unokufuna ukuqaphela amagama aphambili abawasebenzisileyo kunye neenkcazo zomxholo ababonelele ngazo ngenkuthazo yokwenza iividiyo zakho. Oko kwathethi, soloko uyintsusa kwindlela yakho. Ukugcina isithuba kwividiyo ezihamba phambili kwiYouTube kukwalulwazelelo oluhle, oluya kukunceda ubhikice iingcebiso kunye namacebo okudala umxholo wevidiyo eqhuba kakuhle.
Ukuphucula umxholo wevidiyo ye-YouTube ngezona ziphumo zibalaseleyo
I-YouTube yinjini yokukhangela ividiyo ebeka umxholo wayo ngokusekwe kumagama aphambili, izihloko, iinkcazo, njalo njalo, ngokufanayo nayo nayiphi na enye injini yokukhangela. Ukuba unqwenela ukuba umxholo wevidiyo yakho ye-YouTube ufumaneke ngokulula kwaye ufumane ukubonwa simahla kwe-YouTube ngokungagqibekanga, uya kufuna ukwandisa iividiyo ozenzayo kwinkonzo yokubamba. Ingcebiso yeYouTube algorithm iphakamisa iividiyo kubaphulaphuli ngokusekwe kukhetho lwabo lokujonga. Awunotshekisha ukubala okuphezulu kweevidiyo ozenzayo ngokwenza uphando olusisiseko ngamagama aphambili kwi-YT kunye nokwenza umxholo wevidiyo onxulumene namagama aphambili. Into ekufuneka uyenzile kuku -
Yiza nesihloko esomeleleyo esinamagama aphambili aya kwamkelwa ngokulula yi-YouTube algorithm. Zama ukungabi sgaxekile okanye ulandele indlela yokubhala yokubhala; ngokuqinisekileyo iya kukhokelela kwi-SEO ehluphekileyo kwividiyo yakho ye-YouTube.
Yenza ividiyo yakho i-thumbnail. Ividiyo yakho encinci iphakathi kwezinto zokuqala ezibonwa ngabaphulaphuli malunga nevidiyo yakho yeYouTube. Isithonjana esitsala amehlo siza kubakhuthaza abantu ukuba bacofe kwaye badlale umxholo wevidiyo yakho yeYouTube. Yenza le thonjana njengesisombululo esiphakamileyo ngangokunokwenzeka kwiziphumo ezilungileyo.
Bhala inkcazo yevidiyo ecacileyo nefutshane. Abantu kunokwenzeka ukuba badlale ividiyo kwaye bayibukele kude kube sekupheleni ukuba banokuqiniseka ukuba umxholo wevidiyo unomdla kubo. Inkcazo yevidiyo etyebileyo yegama lakho iya kwenza ividiyo yakho ibe nomtsalane ngakumbi kubabukeli kwaye ibancede bayigcine ngexesha lokubaleka.
Faka ii-CTA ngohlobo lwamakhadi, ii-watermark, kunye neentengiso ezi-bumper. Ufuna abaphulaphuli bevidiyo yakho yokuthengisa yeYouTube ukuba bathathe inyathelo ngokuxhasa ishishini lakho. Ukufaka ngokungathandabuzekiyo ezi zinto kwimixholo yevidiyo yakho yentengiso yeYouTube zinokunika abaphulaphuli bakho ividiyo ukuba bayityhale xa befuna ukungena kwiteli yakho yentengiso.
Khuthaza abaphulaphuli bakho beYouTube ukuba bathande, babelane, kwaye babhalise iividiyo zakho. Iqhuba ukubandakanyeka kwaye inefuthe kwinqanaba lakho kwi-YouTube algorithm efanelekileyo.
Isicwangciso esisebenzayo nesisebenza ngokukuko sokuthengisa umxholo we-YouTube sesinye esihlala sizivavanya kwaye sizilungisa ngokwaso ukuze sihambelane neemfuno zabaphulaphuli kunye neminqweno. Ikwagcina isantya kunye neemeko zentengiso zamva nje. Xa usenza ishaneli ye-YouTube yeshishini lakho, uya kuba wenza kakuhle ukuzoba kwaye ulandele ishedyuli yokupapasha ividiyo ukulungiselela iinzame zakho zokuthengisa ividiyo.
Unokufuna ukuqaqambisa umxholo wakho ngakumbi ngokongeza izihlokwana kubo, uzilungiselele kuluhlu lokudlala, kwaye wenze itreyila kwisitishi sakho seYouTube. Unokwahlula iphothifoliyo yakho yemixholo kwiYouTube ngokwenza iindidi zeevidiyo zokuthengisa uphawu lwakho. Umzekelo, ungalayisha iVidiyo yaMthengi ibhlog yevidiyo kuzo zonke iividiyo ezichazayo ozivelisayo kwisitishi sakho.
Intengiso yempembelelo ngoku ibhalisa impumelelo ephezulu. Ungabopha ubambiswano nee-YouTubers ezithandwayo ukuze wandise igama lesitayile sevidiyo yakho yeYouTube okanye ube nabaphembeleli ababalulekileyo ababelana ngeevidiyo zakho nakwezinye iindaba zentlalo. Ubuqhetseba bokusebenzisa ijelo elithandwayo le-YouTube kukuvavanya ukusebenza komxholo wevidiyo yakho ye-YouTube ngamaxesha athile kwaye wenze utshintsho njengoko unqwenela ukulihlaziya namaxesha. Izixhobo ezininzi, ezinje ngeCanva kunye neChannelview, ziyafumaneka kwi-Intanethi, ezinokunceda kwaye zonyuse iinzame zakho zokuthengisa. Ukuba unqwenela ukunyusa intengiso yakho yevidiyo kwi-YT, unokucinga ukuba uyabaqesha nabo.
Ukushwankathela, intengiso yeYouTube ibonakala ngathi ayisiyongqondo xa uzimisele ukungena kwihlabathi lentengiso yevidiyo. Ngelixa kukho uninzi lokusingathwa kwevidiyo kunye neenkonzo zokwabelana ezinikezelwa simahla kwi-Intanethi ezinje ngeVimeo kunye neDailyMotion, akukho namnye onokuphikisa ukufikelela kunye nokusebenzisa ngokulula okunikezelwa yiYouTube. I-YouTube ibonelela ngokusingathwa kwevidiyo kwihlabathi liphela kunye nokwabelana ngewebhusayithi ngokulula, ngaphandle kobunzima obunokuphinda busetyenziswe ngabaqalayo bokulayisha umxholo wabo wevidiyo. Namhlanje, iYouTube yenye yezona ndawo zisetyenziswa kakhulu kuyo yonke imithombo yeendaba yedijithali. Uya kwenza kakuhle ngokusebenzisa amandla ayo ukufikelela kubaphulaphuli ababanzi be brand yakho.
Sichaze ngaphezulu kwawo onke amanyathelo onokuwalandela ukuphuhlisa isicwangciso sentengiso se-YouTube kwishishini lakho. Ukuba ucinga ukuba uza kuxhamla kuncedo olongezelelekileyo lokuseka ishaneli yeshishini eliphumelelayo le-YouTube, uze endaweni elungileyo. Fumana iimbono zasimahla zeYouTube kunye nokunyusa ukuthengisa ividiyo yakho yeshishini ngendlela ebalaseleyo. Ukuba ufuna abaphulaphuli bakho bajonge phambili kumxholo oveliswe ngumjelo wohlobo lweYouTube, unokuthembela kumava ethu kunye nobuchule bokunceda. Khulisa abaphulaphuli bakho beYouTube kunye nabathengi bakho beshishini ngomphefumlo ofanayo!
Ngaba unombuzo malunga neGoViral? Jonga uluhlu olungezantsi kwimibuzo yethu ebuzwa rhoqo. Ukuba umbuzo wakho awudweliswanga apha, nceda unxibelelane nathi.
Ngokulula ukubhalisa, ngoko Ngema kwaye undwendwele icandelo elithi "Zuza iiMali" ukuqala ukubukela iividiyo. Ividiyo nganye oyibukeleyo, uthanda, uphawule kwaye ubhalise kuyo iya kukufumanela iingqekembe zemali.
Nje ukuba ube neengqekembe oza kuzisebenzisa, ngenisa iividiyo zakho kwicandelo "leeVidiyo Zam" kwaye ukhethe ubungakanani babhalisile, ukujonga, ukuthanda kunye nezimvo ofuna ukuzifumana kwividiyo nganye.
Ngenisa iiodolo zakho kwaye uhlale phantsi ngelixa inethiwekhi yethu ihambisa yonke into!
Qhubeka nokufumana iingqekembe simahla ukuze u-odole iinkonzo ezininzi kwiividiyo zakho, okanye undwendwele "Thenga iiNgqekembe" ukuzithenga endaweni yoko.
Ewe sakwenza njalo! Ngokulula Ngema kwaye undwendwele "Mema kwaye ufumane okungakumbi" ukufumana i-URL yakho ekhethekileyo yokuhambisa.
Wonke umntu obhekisa kwinethiwekhi yethu obhalisa iakhawunti kwaye azuze iingqekembe uya kukufumanela ikhomishini ye-10%.
Oku kuthetha ukuba, ukuba ubhekisa kubantu abali-10 abathi ngamnye afumane i-1,000 (i-10,000 yeengqekembe), uya kuthi ngokuzenzekelayo uvuzwe nge-10% yoko, eyi-1,000 XNUMX yeemali.
Ukubhekisa abasebenzisi kwiGoViral yeyona ndlela ilula kunye neyona ingenamsebenzi yokufumana ngokuzenzekelayo iingqekembe kwimizamo yokuthunyelwa kwakho.
Izicwangciso ezilungileyo zokuthumela abasebenzisi nge-URL yakho ekhethekileyo zibandakanya:
1. Thumela ividiyo ye-YouTube malunga neGoViral.
2. Thumela i-imeyile / uthumele umyalezo kubahlobo bakho nakumaqabane akho anamajelo e-YouTube.
3. Bhala iposti yebhlog malunga neGoViral kwiwebhusayithi yakho.
4. Yabelana nge-URL yakho eyodwa yokuhambisa kuFacebook, kuTwitter nakwamanye amaqonga onxibelelwano.
5. Ilizwi lomlomo.
6. Yiba nobuchule! Zininzi iindlela ongathumela ngazo abasebenzisi kwiGoViral!
Uhambisa ngokukhawuleza kangakanani iinkonzo?
Zonke iinkonzo ezihanjiswa yinethiwekhi yethu zigqityiwe ngokupheleleyo luluntu lwabasebenzisi beGoViral ababhalisileyo abagqibe amanyathelo okufumana iingqekembe. Oku kuthetha ukuba isantya apho inkonzo nganye ihanjiswa khona yahlukile ngokusekwe kutrafikhi esiyifumanayo, kunye nemiyalelo ekwi-network yethu nangawuphi na umzuzu. Ngamanye amaxesha zithunyelwa ngokukhawuleza kwaye ngamanye amaxesha zithunyelwa ngesantya esincinci.
Ukuba ufuna iodolo yakho ihanjiswe ngokukhawuleza, kuya kufuneka Ngema kwaye undwendwele iphepha "lobulungu", apho unganyusela khona kwizicwangciso zeGolide okanye zePlatinamu ukuze ufumane umrhumo kwaye ufumane "iiNtengiselwano eziPhambili".
Izicwangciso zeGolide nePlatinam ziya kubeka iividiyo zakho ngaphambi kwezinye ukufumana iinkonzo zakho ngokukhawuleza okukhulu!
9th Meyi 2022
Ungawukhetha njani uMculo oGqibeleleyo kwiVidiyo yakho yeYouTube?
Xa abantu becinga ngeevidiyo, ubukhulu becala bacinga ngezinto ezibonwayo. Nangona kunjalo, inyani kukuba iividiyo azikho malunga nokubonwayo kuphela - iaudio idlala indima enkulu ...
27I Epreli 2022
Izizathu ezi-5 zokuba kutheni uYouTube kufuneka ibeyiakhawunti yakho yaseNtlalo
Ukuza kuthi ga kwiminyaka embalwa edlulileyo, uninzi lwabathengisi ngekhe bacinge ngeYouTube kwinqanaba elifanayo njengokuthandwa kwe-Facebook, Instagram, kunye ne-Twitter. Nangona kunjalo, amaxesha aye...
7I Epreli 2022
Ungamchaza njani omnye uMdali ngokuphefumlela kwabo ividiyo yakho?
I-YouTube izele ngabadali bomxholo okhuthazayo, kwaye akukho nto iphosakeleyo ukubandakanya umxholo wabanye kwiividiyo zakho. Nangona kunjalo, xa uyenza, kubalulekile ukuba uchaze...
IiNkonzo ze-YouTube Iinkonzo ze-Twitter Iinkonzo zeTwitch IiNkonzo zePinterest Spotify IiNkonzo Iinkonzo zeSandiCloud
izimvo kwababhalisele izimvo azithandayo Iiyure zokubukela Iyazinzisa izabelo
Ngokuzingca Sikhonza amawaka abasebenzisi beYouTube
Jonga uphononongo lomsebenzisi weGoViral kunye namava abo
by Ikhowudi Novak
Iinkwenkwezi ezintlanu iwebhusayithi! Iwebhusayithi isebenza kakuhle kwaye zonke iinkqubo zikhuselekile kwaye zikhuselekile. Ukuba ujonga le nkonzo inokukunceda ufumane iZimvo zikaYouTube eziSimahla, ukuthandwa, ababhalisi kunye neeNgxelo uhlala kwindawo elungileyo. Ungayithemba iGoViral 100%
by ULilly-Rose Bolton
Enkosi kakhulu! Umsebenzi omhle kakhulu! Enkosi kwiGoViral ndihlala ndifumana iZimvo zikaYouTube eziSimahla. Ndinqwenela ukuba ndingayifumana i-GoViral kwangoko, iyakwenza lula ubomi bam.
UMDLALO OWENDLELA OCALA AMANE
by UMDLALO OWENDLELA OCALA AMANE
Thanda le webhusayithi kwaye uhlala…
Thanda le webhusayithi kwaye uya kuhlala ufumana ababhalisile kunye nezinto abazithandayo kunye neembono nceda uqale ukusebenzisa le webhusayithi uyayithanda iwebhusayithi.
Joyina inethiwekhi yethu yasimahla kwaye uqalise ukufumana izimvo, ukuthanda, ababhalisile kunye nezimvo namhlanje!
Fumana izimvo zasimahla zeYouTube, ababhalisi basimahla beYouTube, izimvo zasimahla zeYouTube kunye nokuthandwa simahla kweYouTube usebenzisa inethiwekhi yethu elula nesebenzayo.
Izibonelelo zokwenza itreyila yeSitishi sakho sikaYouTube
Iingcebiso zokuThintela ukuFumana ukungathandwa kwiVidiyo yakho yeYouTube